Raharaha momba ny serivisy - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny valanaretina dia nametraka orinasa sy famokarana sarontava haingana izahay.
Ny mpiara-miasa rehetra amin'ny orinasa dia niara-niasa mba hanao ezaka faran'izay tsara hanampiana ny fiarahamonina iray manontolo.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny valanaretina, ny sarontava novokarina avy amin'ny tsipika famokarana AKF dia nihaona tamin'ny fitakiana an-trano maro isan'andro.
Amin'izao fotoana izao ny vokatra AKF dia amidy any ampitan-dranomasina amin'ny fividianana orinasa isan-karazany sy ny rafitra fifanampiana ao Shina Ho fanampin'izany, dia nandray anjara betsaka tamin'ny ady eran-tany amin'ny areti-mandringana koa izahay.
Shen zhen Xin zhong Property Co., Ltd. dia sampana iray amin'ny Bank of China ao amin'ny Distrikan'i Futian, Tanànan'i Shen Zhen. Nividy AKF ity orinasa ity
saron-tava fiarovana azo ovaina .............
Fahefana an-tanànan'ny distrika:
Nandritra ny vanim-potoana nivoahan'ny valanaretina dia tsy nijanona tao an-trano soa aman-tsara ireo mpiasa tao amin'ny fahefan'ny tanàna. Niady tamin'ny laharana voalohany izy ireo mba hamita ny asa mitokana ho an'ny valanaretina. Nividy sarontava medikaly fanary be dia be avy tany amin'ny AKF izy ireo.
Orinasa Ding Tai Fu ao amin'ny Distrikan'i Ping Shan:
Nandritra ny vanim-potoana nivoahan'ny valan'aretina, ireo mpiasa mazoto amin'ny ozinina dia mbola niasa teo amin'ny laharana voalohany amin'ilay atrikasa. Ny sarontava AKF dia miaro ny valanaretina voalohany ho an'ny famokarana!
Mpiasa an-tsambo eo alohan'ny fitsaboana mandritra ny vanim-potoana mihatra amin'ny areti-mifindra, ny mpiasan'ny fitsaboana dia mila fiarovana tsara indrindra.
Ny sarontava AKF dia miaro ny tanana voalohany ho an'ireo mpitsabo ..................